Ra’iisal wasaaraha UK oo si qarsoodi ula aqal galay gabadhii u doonanayd | Xaysimo
Home War Ra’iisal wasaaraha UK oo si qarsoodi ula aqal galay gabadhii u doonanayd
Ra’iisal wasaaraha UK oo si qarsoodi ula aqal galay gabadhii u doonanayd
Wuxuu intaas ku daray in lamanahan ay qabsan doonaan xaflado kale oo lagu xusayo arooskooda oo ay kasoo qeybgeli doonaan qoyska iyo saaxibada.
Inkasta oo uu Johnson oo 56 jir oo horey u guursaday labo xaas balse kaniisadda Roman Catholic ayaa u ogolaaneysaa dadka horraan xasaaskooda ay kala tageen inay guursan karaan haween kale waa haddii guurkoodi hore uu ka baxsanaa xeerarka kaniisadda Roman Catholic.
James Cleverly oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga muxaafidka ayaa Twitter-ka soo dhigay lamanayaasha oo ku damaashadayo dhul doog ah xilli ay cadcadeeddu taagneyd, waxaana gashaada dambe ee sawirka ka muuqdaa miiska la saaray waxyaabo mac macaan ah iyo waxyaabo qurxoon oo goobta kasoo laalado.
Ra’iisul Wasaarihii ugu dambeeyay ee guursada isaga oo xilka haya dalka UK wuxuu ahaa Robert Banks Jenkinson sanadkii 1822.
Gabadhan uu guursaday Ra’iisul Wasaaraha UK, Carrie Symonds waxay ka shaqeyn jirtay xafiiska warbaahinta u qaabilsan xisbiga muxaafidka markaas oo ay ka shaqo bilowday 2010-kii, labo sano waxay bilowday inay ka shaqeyso ololaha in mar kale Johnson dib loogu soo doorto duqa magaalada London.
Waxay soo noqotay madaxa xisbiga u qaabilsan warbaahinta iyo xiriirka ka hor inta aysan ka tegin shaqadaas sanadkii 2018, waxay markii ku biirtay ha’yada ka shaqeyso ilaalinta nolaha badda.
Warbaahinta ayaa markii ugu horreysay soo hadal qaaday xiriirka Ra’iisul Wasaaraha UK iyo gabadhan bishii July ee sanadkii 2019-kii.
Bishii Febraayo 2020 ayay shaaciyeen inay is doonteen isla markaana ay gabadha uur leedahay.
Waxaa bishii April u dhashay wiil kaas oo loo bixiyay Wilfred.
Mr Johnson iyo xaaskiisii hore Marina Wheeler, waxay 2018 ku dhawaaqeen inay kala tageen kadib 25 sano oo ay wada joogeen.
Wuxuu horraan guursaday gabadh lagu magacaabo Allegra Mostyn-Owen.